CFA VS. CPA - Ndeupi Certification iri nani? [It's a Close Call]
CFA Vs CPA: Ndeipi Best Kwauri?
23 Aug CFA Vs CPA: Ndeipi Best Kwauri?
Nyanzvi mune mari kazhinji utevere zvinodiwa nachiremba kuti mberi nemabasa avo. Vaipupurirwa Public akaundendi (CPA) uye Chartered Financial muongorori (CFA) vari debatably vaviri zvikuru nomukurumbira mazita avo dzazvinogara minda. Ndezvipi zvakasiyana, uye ndoupi nani? The chikuru kusiyana vaviri vari chii chinzvimbo chimwe nechimwe anofukidza uye basa mikana. CPA runoonekwa kuti "dema bhandi ndizvidavirire" uye anogadzira nokuda nedhigirii Accounting uye Auditing, nepo, CFA Program focusses musi Investment Management kufukidza yakafara misoro akafanana Corporate Finance, Portfolio Management, Dérivés, yakamisirwa Income, Alternative Investments uye anogadzira nokuda nedhigirii Investment Banking, Portfolio Management, Financial Research nezvimwewo. Pane kubvunza mubvunzo uyu kuti "inova nani?", iwe unofanira kubvunza "riri nani iwe".
CFA kana CPA: Bvunzo Content uye Format
A CPA ane nan'anuro asiri paruzhinji maakaundendi, mutero maakaundendi, uye mari nyanzvi vanotsvaga zita unoratidza nokuwanda crunching unyanzvi. A CPA anewo mitemo kodzero kusaina odhita mushumo kunoita rokuti chaiyo. Maererano AICPA, CPAs nehasha kuwana 10-15% zvimwe kana votsvaka kushanda zvichienzaniswa non-credentialed maakaundendi. Uyewo CPAs vari kukwezva vashandirwi pane vasiri CPAs. Maererano U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), zveakaunzi uye wevanoongorora akaunzi sika, izvo zvinosanganisira CPA pakati mamwe chizvidavirire nenyanzvi, vakanga projected kukura nokuda 13 muzana pakati 2012 uye 2022.
The CFA rokuremekedza iri mureza yegoridhe mari uye inivhesitimendi. Kana uri kutsvaka basa sezvo zvakarurama vaongorori, Fund mamaneja, uye nyanzvi twa zvakanaka kana ruzhowa mari dzimba, ichi ndicho chakanakisisa rokuremekedza unogona kuwana. CFAs pfungwa inivhesitimendi utariri.
The pamusoro Vashandirwi pamusoro CFAs zvinosanganisira vanoremekedzwa zvikuru Makambani zvemari munyika, zvakaita se, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, uye Wells Fargo.
Vazhinji ndivo inivhesitimendi nemabhangi, asi CFA Program kunopfuura kuti kupinda ruzivo uye unyanzvi kupfuura kuhupenyu yose mubhizimisi utariri basa mumaonero vaiita.
The kukodzera nzira nokuti CPA rokuremekedza iri kumusoro pakati zvose mari chokuita zvinodiwa. Munofanira kuva kanenge makore 4 tsvimborume dhigirii uye kakawanda, 150 chikwereti maawa (yakaenzana 5 makore dzidzo yepamusorosoro) kugara nokuti bvunzo. The CPA rezinesi akapiwa nokuda mumwe nomumwe 55 inoti kana chepasi muUnited States. Nekuti mukuru chipingamupinyi hwokupinda uye chakaoma kunzwisisa kushandisa urongwa, zviri zvikuru rakaoma muitiro. The CFA iri rokuti akamupa CFA Institute, pose asiri mubereko sangano. The institute kunobva muna US, asi pane 3 zvenharaunda mahofisi uye 200 local chapters around the world. Unogona kushandisa kuburikidza akatanga uye kushanda husina. Chero bedzi uine tsvimborume dhigirii (hazvo 4 makore), unogona kugara nokuti bvunzo. Unogona kunyange kutora bvunzo asati kudzidza
The CPA bvunzo ine 4 bvunzo zvikamu: Financial Accounting & Reporting, odhita & chipupuriro, Murau Business Environment & pfungwa. The bvunzo iri 100% nekombiyuta zvinosanganisira vakawanda mibvunzo sarudzo, basa anotsanangura simulations (nyaya zvidzidzo), uye zvakanyorwa kukurukurirana. Unogona kusarudza kuti kutora 4 zvikamu imwe panguva, 2 panguva, kana kunyange 4 panguva imwe. Unogona kugara nokuti bvunzo ipi nguva iri CPA bvunzo yekuedzwa hwindo, unova kutanga 2 mwedzi mumwe muzvina uye panguva prometric chero nzvimbo yose US. Panewo muchizviedza nzvimbo muJapan, Brazil uye 4 Middle Eastern nyika.
Most mamiriro mapuranga zvinoda kumativi 1 gore rokuzvidavirira ruzivo usati kuwana rezinesi, uye vakawanda inoti chiitiko ichi chinofanira kutarisirwa uye kupupurirwa chinoshingaira CPA.
The CFA bvunzo youduku ndiyo ndoda tefa. Pane 3 kwevari bvunzo, uye unofanira kupedza navo zvakakodzera kuti vatamire inotevera. The bvunzo rinonyatsotarira mari kuongorora uye Portfolio kutarisirwa pachinzvimbo chizvidavirire, odhita uye mutero. The bvunzo chinotarisirwa kaviri pagore kuti Level 1, uye kamwe chete pagore nokuda Level 2 uye 3. Kune vakawanda dzakawanda yokuedzwa nzvimbo nokuda CFA bvunzo mumaguta makuru uye mumaguta. Kunyange zvazviri unogona kupedza CFA bvunzo mukati 18 mwedzi (danho 1 muna December, danho 2 muna June, danho 3 muna June gore pashure), musarudzo vakawanda tora 4 Makore kupedza bvunzo. Zvinotora nguva yakareba kuti kuva CFA kupfuura CPA. You vanofanira kuva 4 makore akakodzera ruzivo kunotora CFA rokuti. foromani Your, ndiani achange Kuongorora ruzivo rwako, haafaniri kuva CFA.
Kana kusarudza kuenda nokuda CFA kana CPA, chokutanga uye chikuru chinhu unofanira kufunga kwako basa. kunze kwaizvozvo, ari CPA rokuremekedza ane zvimwe zvinhu dzidzo uye ruzivo zvinodiwa, asi kamwe iwe kuti vanokodzera, zvichiitika zvikuru nokukurumidza. CFA ane yakaderera kupinda chipingamupinyi asi zvinotora nguva yakareba kupedza. Chisarudzo pakati izvi zviviri runovawo kwauri uye basa rako zvinangwa. Rakatanga uye yakanakisisa CPA Review Course kana find the best CFA Study Materials
pamusoro 7 CPA REVIEW Courses
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount, Deep Discount 36 anoshandisa nhasi
Last Used 21 maminitsi kare
Zuva rekupera: Gumiguru 19, 2018
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 39 anoshandisa nhasi
CPA, Wiley CPAexcel, Special Offer 37 anoshandisa nhasi
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount 40 anoshandisa nhasi
Zuva rekupera: Gumiguru 15, 2018
Last Used 54 masekonzi apfuura
CPA, Exclusive Discount, Fast Forward Academy 41 anoshandisa nhasi
CPA, Special Offer, Kupwanya The CPA 38 anoshandisa nhasi
Last Used 38 maminitsi kare
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 35 anoshandisa nhasi
Last Used 23 masekonzi apfuura
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 33 anoshandisa nhasi
Last Used 25 maminitsi kare
CPA, Yaeger CPA Review, Exclusive Discount 38 anoshandisa nhasi
CPA, Gleim CPA Review, Special Offer 33 anoshandisa nhasi
50% dhisikaundi on Mega Test Bank Set (candidates must purchase all 4 sections to qualify for the discount). 50% dhisikaundi on REG Premium CPA sections. We want to encourage candidates to take REG in 2018 before the exam changes. This offer will also give candidates a 50% discount on our other Premium CPA sections as well, in case they have already taken REG. Please note that this promotion will only apply to ONE Premium CPA section per customer.
CPA, Gryfina, Exclusive Discount 37 anoshandisa nhasi
CPA, Gleim CPA Review, Exclusive Discount 40 anoshandisa nhasi
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 38 anoshandisa nhasi
CPA, Roger CPA Review, mari Offer 35 anoshandisa nhasi
CPA, Surgent CPA Review, mari Offer 35 anoshandisa nhasi
CPA, Surgent CPA Review, Free Trial 40 anoshandisa nhasi
Zuva rekupera: Gumiguru 16, 2018
CPA, Roger CPA Review, Other 38 anoshandisa nhasi
CPA, Wiley CPAexcel, Other 40 anoshandisa nhasi